51 articles under Upgrade Yourself
Accounting Arts & Culture Business Career Advice CV Day In The Life Education Help & Support Internships & Volunteering Job Search Skills Management Money NGO / Social Enterprise Other Topics Personal Growth Sales & Marketing Self-Employment Team University Upgrade Yourself Workplace Success Wynee
A Day in the Life ofaProcurement Manager
[Zawgyi] ဝယ်ယူရေး မန်နေဂျာတစ်ဦးရဲ့ တစ်နေ့တာဘဝထောက်ပံ့ရေးစက်မှု လုပ်ငန်းအပိုင်း အလုပ်လ...
How Social Media can be made use of more efficiently
[Zawgyi] လူမှုကွန်ယက်ကတစ်ဆင့်လူအချင်းချင်းဆက်သွယ်ရာမှာပိုပြီးလွယ်ကူစေသလို မြောက်မြားလှတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ အဖြစ်အပျက်တွေက တကမ္ဘာလုံးကလူတွေဆီကိုစီးဆင်းနေပါတယ်။
How to Maximize Productivity through Four Bulletproof Habits
[Zawgyi] မိမိရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေမည့် တိကျသေချာသော နည်းလမ်း(၄)သွယ် လူတိုင်းအတွက်တစ်ရက်မှာ၂၄နာရီသာရှိပေမဲ့ဘယ...
[Unicode] တက်ကသိုလျဘှဲ့ယူခွငျးအခမျးအနားသညျ ကြောငျးသားမြားအတှကျ ဘဝ၏အကူးအပွောငျးမြားတှငျ အရေးကွီးသောပွောငျးလဲမှုအဆငျ့ဖွဈပါသညျ။ လကျတှတှေ့ငျအစကနဉီးဟူသောစာလုံး၏အဓိပ်ပ...
Why Art isaPursuit You Should Start to Develop
[Zawgyi] ဘာ့ကြောင့် အနုပညာဟာ သင်စတင် လိုက်စားသင့်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်သလဲ ? ကျွန်မတို့ အနုပညာလို့ပြောကြတဲ့အခါမှာ လူအတော်များမျာ...
[Unicode] လူအမြားရှတှေ့ငျ စကားပွောခွငျးအတှကျ နညျးလမျးကောငျးမြား Glossophobia ဆိုတာ လူအမြားရှကေို့ထှကျပွီးစကားပွောရမှာကွောကျရှံ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ တခြို့ကသရေမှာကိုကွောကျရှံ့တာထကျတောငျတောငျပိုကွောကျတတျကွပါတယျ။ ဒါ...
Discovering the Leader in Each of Us
[Zawgyi Version] ဇာတ်လမ်းကတော့ရန်ကုန်မြို့လယ်အချက်အချာကျတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့တိုက်အမြင့်ပေါ်က စားပွဲပေါ်မှာ Amy, Brenda နဲ့ကျွန်မတို့သာမန်အပြန်အလှန်စကားပြောနေရာကစပါတယ်။စကားပြောလို့အပြီးမှာတော့ လေးနက်တဲ့အတွေးတွေနဲ့...
5 Ways To Make Your University Life Unique
[Zawgyi Version] သင့်ရဲ့တက္ကသိုလ်ဘဝကထူးခြားစေသော5နည်းလမ်းများတက္ကသိုလ် ကျောင်းသား ဘဝ ရဲ့ အကောင်းဆုံး အချက် ဟာလွတ်လပ်မှု ဖြစ်...
A Day in the Life of An Interior Designer (LandscapeDesigner/ Architect)
[Zawgyi] Interior Designer တစ်ဦး၏ တနေ့တာမနက် (၈) နာရီဒီအချိန်မှာတော့ email ထဲမှာ clients တွေဆီက message တွေဝင်မယ်။ suppliers တွေ၊ အခြား ကုမ္ပဏီက ပစ္စည်းရောင်းချင်တဲ့သူတွေက ဆက်သွယ်မယ့် e...
How do I improve my English proficiency?
[Zawgyi] အင်္ဂလိပ်စာ စွမ်းရည်တိုးတက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အင်္ဂလိပ်ဘာသာ (ဒါမှမဟုတ်) ဘာသာရပ်တစ်ခုခုမှာ ကျွမ်းကျင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အင်္ဂလိပ်လို အရေး၊ အဖတ်၊ ပြောဆို၊ နားထောင်တာတွေကို...
3 Capabilities to Increase Success In Your Career
ကိုယ့်ဘ၀ တလျှောက်လုံးမှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ရတဲ့ နာရီပေါင်းကို တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် နာရီပေါင်း (၈) သောင်း ပျမ်းမျှ ရှိတာဖြစ်ပြီး ဒီိပမာဏဟာ အိပ်ချိန်က လွဲပြီး ကိုယ့်ရဲ့ အချိန်တွေ အားလုံးရဲ့ (၇၀) ရာခိုင်နှုန်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး အချိန်တေ...
Live Chat with Scholars - Oct 2017
Scholars များနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း "Scholars များနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း" ဆိုတဲ့ Networking event လေးတစ်ခုကို အောက်တိုဘာ 21 ရက်နေ့က ပန်သူရိယ စားသောက...